RAVALO SY RAJOELINA : Namitaka ny sendikà -
AccueilSongandinaRAVALO SY RAJOELINA : Namitaka ny sendikà
RAVALO SY RAJOELINA : Namitaka ny sendikà
Tsy niafina intsony fa efa samy niseho imasom-bahoaka tamin’ny fanohanany ny hetsika teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai, ny filohan’ny antoko Tim Ravalomanana Marc sy ny mpitarika ny Mapar Andry Rajoelina. Izany hoe izy ireo no nanome toky fa hamaha ireo olana rehetra ho an’ireo olona nety notarihiny teny an-kianja nanomboka tamiin’ny faha- 21 aprily 2018 lasa teo. Anisan’ny nisongadina tamin’ireny ny olana maro nilam-baliny nentin’ireo sendika. Nanome toky ireo depiote Tim sy Mapar tamin’izany fa tsy maintsy ahita vahaolana ho an’ireto mpitokona ireto. Fanomezan-toky izay tsy nolavin’ireto mpitarika ny antokony tsirairay avy. Taorian’ny fanaovan-tsonia ilay fifanarahana ara-politika, ka nanendren’ny Mapar ny Praiminisitra ankehitriny anefa dia efa nandeha tany amin’ny tsy izy ny fitarihina ilay tolona. Tsy nisy resaka, tsy nisy dinika fa dia niala teny an-kianja avy hatrany aloha ireo depiote Mapar. Taorian’ny namoahana ny datim-pifidianana indray, dia efa nilaza ny filohan’ny Tim, fa tokony samy hifantoka amin’ny fikarakarana izany fifidianana izany amin’izay ny rehetra.
Tsy nisy resaka mihitsy araka izany ireo fitakiana nataon’ny mpitarika sendika, izay nilaza maro an’isa tamin’ireo mpitokona teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai. Nisy tamin’izy ireny no nilaza fa natao fitaovana politika nentina nitadiavana Praiminisitra sy toerana minisitra fotsiny izy ireo, fa nanaovana be marenina ny kabary nataony teo anatrehan’ireo depiote Tim sy Mapar. Porofon’izany, samy niezaka ny nanala ireo depioteny avokoa i Andry Rajoelina sy Ravalomanana Marc rehefa nahafa-po azy ilay fifanarahana ara-politika nataony Sonia. Voaporofo ihany koa fa izy ireo no tena tompon-kevitra tamin’ny fanaovana fitokonana, fa tsy ireo depiote miisa 73, araka izay namitahana ny vahoaka teny an–kianja. Rariny araka izany raha toa ka very an-javony ilay fitakiana sendikaly. Ny tena marina dia tsy tao anatin’ny fitakiana nandritra ny hetsika mihitsy fa natao haingon-tsehatra fotsiny. Nentina nitazonana ireo olona niakatra kianja fotsiny ihany fa tsy dia tena laharam-pahamehana loatra. Miandry ny hetsika manaraka indray hararaotina hanaovana fitakiana fa ny tamin’ity indray mitoraka ity aloha izany dia efa naman’ny fotoana very. Tsy azo lavina ihany koa aloha fa saika ireo olona mpitady seza avokoa ireo nisora-tena fa mpitarika sendika nikabary teny amin’ny 13 Mai nandritra ireny hetsika ireny.